UMlawuli-Jikelele we-WHO uthetha kwintlanganiso yabaPhathiswa bezeMpilo kunye nezeMali be-G20
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » UMlawuli-Jikelele we-WHO uthetha kwintlanganiso yabaPhathiswa bezeMpilo kunye nezeMali be-G20
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
UMlawuli-Jikelele we-WHO uthetha kwintlanganiso yabaPhathiswa bezeMpilo kunye nezeMali be-G20.
Nangona silwela ukuphelisa lo bhubhani, kufuneka sifunde izifundo esisifundisa zona kwaye silungiselele olandelayo.
Iqhutywa kukwahluka kwe-COVID-19 Delta, iimeko kunye nokufa kuphinda kunyuke kwihlabathi.
Nangona izitofu zokugonya ze-COVID-19 zisindisa ubomi, azikunqandi usulelo lwentsholongwane.
I-36% yabemi behlabathi ngoku igonywe ngokupheleleyo. Kodwa e-Afrika, yi-6% kuphela.
Amagqabantshintshi okuvula oMlawuli-Jikelele we-WHO kwintlanganiso yaBaphathiswa bezeMpilo nabaSebenzi bezeMali be-G20 – ngowama-29 kweyeDwarha ngowama-2021:
Obekekileyo uDaniel Franco,
Obekekileyo uRoberto Speranza,
Enkosi ngethuba lokuzimanya nawe namhlanje.
Ndiqinisekile ukuba xa le ntlanganiso yayicwangciswa okokuqala, sonke sasinethemba lokuba ubhubhane uya kuba uphelile. Ayiyo.
Iqhutywa luhlobo lweDelta, iimeko kunye nokufa kuphinda kunyuke kwihlabathi, kubandakanya uninzi lwamazwe akho.
Nangona izitofu zokugonya zisindisa ubomi, azikuyeki usulelo, yiyo loo nto ilizwe ngalinye kufuneka liqhubeke nokusebenzisa zonke izixhobo, kubandakanywa nezempilo yoluntu ezilungelelanisiweyo kunye nentlalontle, kudityaniswe novavanyo, unyango kunye nezitofu zokugonya.
Izolo, WHO kunye namahlakani ethu apapashe isiCwangciso-qhinga esitsha kunye noHlahlo-lwabiwo-mali loFikelelo ku Covid-19 Izixhobo ze-Accelerator, kunye nombuzo we-23.4 yeebhiliyoni zeedola zaseMelika ukwenza uvavanyo oluqinisekileyo, unyango kunye nogonyo luya apho lufuneka khona kakhulu.
Enkosi ngokuqaphela ukubaluleka WHOIithagethi zokugonya ubuncinane iipesenti ezingama-40 zabemi bawo onke amazwe ekupheleni kuka-2021, kunye nama-70 epesenti phakathi ku-2022.
Ukufikelela kuma-40% ebesijolise kuwo, sifuna iidosi ezongezelelweyo ezingama-550 ezigidi. Oko malunga nemveliso yeentsuku ezili-10. Njengoko umhlobo wam uGordon Brown esitsho, ngaphezu kwesiqingatha selo nani lihleli lingasetyenziswa kumazwe akho, kwaye lingathunyelwa kwangoko.
Kuyinyani ukuba iqela elincinci lamazwe linemida ethile, esisebenzela ukuyilungisa.
Kodwa kuninzi lwamazwe, yinto nje yokungonelanga kobonelelo.